Ma jiran tahay? - Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga ISD 834
COVID-19 Geedka Go'aanka ee loogu talagalay Dadka Dugsiyada, Barnaamijyada Daryeelka Carruurta
Raacitaanka dariiqa saxda ah haddii cunug, arday, ama qof shaqaale ah uu la kulmayo astaamaha soo socda ee la jaan qaadaya COVID-19:
Caadi ahaan: qandho ka weyn ama u dhiganta 100 ° F, bilow cusub iyo / ama qufac ka sii daraya, neefsashada oo ku adkaata, dhadhan cusub ama ur.
Wax yar: cuno xanuun, lallabbo, matag, shuban, dhaxan, murqo xanuun, daal fara badan, madax xanuun cusub oo soo booda, bilow cusub oo ciriiriga sanka ama sanka oo dareera.
daabac geedka go'aanka-19
baaritaanka guriga ee bilaashka ah
Dadka leh hal astaamo "aan caadi ahayn"
Qiimee astaamaha oo go'aamiya haddii qofku si fiican ugu filnaado inuu ku sii jiro dugsiga ama barnaamijka.
Ku noqoshada dugsiga ama barnaamijka 24 saacadood ka dib markii astaamuhu fiicnaadeen.
Walaalaha iyo ehelada guriga lala wadaago uma baahna inay guriga joogaan ama karantiil noqdaan.
Joog guriga ama guriga u dir oo tixgeli qiimeynta bixiye daryeel caafimaad iyo / ama baaritaanka COVID-19.
Tijaabada xun ee COVID-19 ama cilad kale
Ku noqoshada dugsiga ama barnaamijka 24 saacadood ka dib markii astaamuhu fiicnaadeen
Imtixaanka wanaagsan ee COVID-19
Guriga joog gooni ahaanshihiisa ugu yaraan 10 maalmood laga bilaabo waqtiga astaamaha la bilaabay illaa astaamaha laga bogsanayo IYO qandho la'aan 24 saacadood (iyada oo aan qandhada yareynin qandhada).
Walaalaha iyo xiriiriyeyaasha qoysku gurigey ku sii jiraan ama guriga ayaa loo diraa.
Dadka leh hal astaamo "aad u badan" ama ugu yaraan laba astaamood "aan caadi ahayn"
Qofku wuxuu joogayaa guriga ama waxaa loo dirayaa guriga sidoo kale walaalaha iyo xiriiriyeyaasha reerka, ka dib wuxuu doortaa:
Qofku wuxuu kahelaa daryeel caafimaad qiimeyn iyo / ama baaritaanka COVID-19.
Walaalaha iyo xiriiriyeyaasha qoysku gurigey ku sii jiraan ama waxaa loo diraa guriga oo laga karantiilaa dhammaan howlaha muddo 14 maalmood ah.
Ma raadineyso qiimeyn iyo / ama baaritaanka COVID-19 ee bixiyaha xanaanada caafimaadka
Dadka aad ugu dhowdahay qof laga helay COVID-19
Xiriir dhow waa qof ku jira 6 fuudh ugu yaraan 15 daqiiqo qof cudurka qaba. Tan waxaa ku jira qof kasta oo isla guriga ku nool.
Haddii aad xiriir dhow la leedahay qof qaba COVID-19 (soo-gaadhis), waxaad u baahan tahay inaad guriga joogto oo aad ka fogaato dadka kale (karantiil). COVID-19 wuxuu kugu qaadan karaa ilaa 14 maalmood inuu kugu xanuujiyo, dadka qaarna COVID-19 weligood ma dareemaan xanuun, marka waxaad u baahan tahay inaad ka go'do dadka kale si aadan ugu fidin fayraska adiga oo aan ogayn.
Tilmaamaha shaqsiyaadka la tallaalay:
Haddii qof dhammaystiray tallaalka COVID-19 (laba qiyaasood oo isku xigxig ah oo laba-qaadasho ah ama hal qiyaas oo ah hal-qiyaas-tallaal) oo la soo bandhigo, uma baahna inay karantiil ahaadaan haddii DHAMMAAN waxyaabaha soo socda ay run yihiin:
Soo-gaadhista COVID-19 waxay ahayd ugu yaraan 14 maalmood ka dib markii taxanahooda tallaalku si buuxda u dhammaaday.
Soo-gaadhista COVID-19 waxay ku jirtay 90 maalmood gudahood markii u ugu dambaysay ee tallaalka taxanaha ah.
Iyagu hadda ma laha wax astaamo ah oo ah COVID-19.
Xitaa ka dib marka qofku ka bogsado COVID-19 ama uu si buuxda u tallaalo waa inuu weli sii wadaa inuu fogeeyo, xirto maaskaro si fiican ugu habboon, gacmahiisa dhaqo badanaa, oo raaco taxaddarrada kale. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg CDC: Goorma La karantiilaa .
Waa inaad ka fogaataa dadka kale 14 maalmood haddii:
Qof gurigaaga jooga ayaa leh COVID-19.
Waxaad ku dhex nooshahay dhismo dad kale, halkaas oo ay adag tahay inaad ka fogaato dadka kale ayna fududahay inaad ku faafiso fayraska dad badan, sida xarun daryeel muddo dheer ah.
Waxaad ka fiirsan kartaa inaad ka ag dhowaato dadka kale 10 maalmood ka dib haddii:
Malaha wax calaamado ah.
Imtixaan wax ku ool ah laguguma sameynin COVID-19.
Ma jiro qof gurigaaga ka mid ah oo leh COVID-19, mana la degan tahay dhisme dad kale, halkaas oo ay adag tahay in laga fogaado dadka kale ayna fududahay in fayraska lagu kala qaado dad badan, sida xarun daryeel muddo-dheer ah.
Xitaa 10 maalmood kadib waa inaad weli:
U fiirso astaamaha illaa maalinta 14. Haddii aad leedahay wax astaamo ah, guriga iska joog, oo kafog dadka kale, oo isla markiiba isbaro.
Sii wad inaad xirto maaskaro oo ka fogow ugu yaraan 6 fuudh dadka kale.
Waxaad ka fiirsan kartaa inaad ka ag dhowaato dadka kale 7 maalmood kadib oo keliya haddii:
Waxaad iska baareysaa COVID-19 ugu yaraan shan maalmood oo buuxa kadib markaad xiriir dhow la yeelatay qof qaba COVID-19, baaritaankuna waa diidmo.
Xitaa toddobada maalmood ka dib waa inaad weli:
Ma joojin kartid karantiil ka hor toddobo maalmood sabab kasta ha noqotee.
Booqo websaydhka MDE wixii macluumaad dheeraad ah
Qoysaska, ardayda iyo shaqaalaha ayaa laga filayaa inay iskood iskaga baaraan guriga kahor imaanshaha dugsiga.
Qof kasta oo soo bandhiga astaamaha soo socda ee COVID-19 waa inuu guriga joogaa :
Xumad 100.0 darajo ah ama ka sareysa
Lumitaan ur ur ama dhadhan
Calaamadaha caloosha iyo mindhicirka ee shuban, matag, ama lallabo
Ardayda muujisa astaamahan inta lagu jiro maalinta iskuulka waa la qiimeyn doonaa waxayna u badan tahay in gurigooda loo diro.
Fadlan kala xiriir kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga wixii su'aalo ah ee ku saabsan calaamadaha, karantiilidda, ama caafimaadka.
Dugsiga Dhexe ee Oak-Land:
Dugsiga Dhexe ee Stillwater:
Dugsiga Sare ee Stillwater Area: